Ururka Ahlu Sunna oo dacwad ka gudbineysa dowladda Soomaaliya - Awdinle Online
Ururka Ahlu Sunna oo dacwad ka gudbineysa dowladda Soomaaliya
November 26, 2019 (AO) – Ururka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ku dhawaaqay in ay dacwad aad u balaaran ka gudbinayaan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in ay xadgudub dhinac walba leh ay ka waddo degaanada Galmudug.
Kulan aan loo dhan yahay oo Ahlu Sunna ay xalay ku yeesheen Magaalada Dhuusamareeb ayey kaga arrinsadeen waxa ay ka yeelayaan dhismaha Maamul Goboleedka Galmudug ee ay Dowladda Federaalka ah keligeed iska wadato.
Hoggaanka Ahlu Sunna aya aisku raacay qodobada soo socda:-
4: In tallaabo kasta oo ay qaadayaan Ahlusunna ay noqdaan kuwo taxadar leh,iyada oo hoggaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan, uu walaac ka muujiyey sida ay dowladda u wado dhismaha Maamulka Galmudug.
Guddiga Farsamo ee Doorashada Galmudug ee hoostaga Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay soo saaray jadwalka doorashada Maamulkaas iyaga oo sheegay in xulista Baarlamaanka, Doorashada Guddoonka iyo Madaxweynaha ay dhaceyso Bisha December.
Previous articleLafta-gareen oo la kulmey Madaxweyha Djibouti
Next articleDhageyso :-“Hey’adda Nabadsugida waxay noqotay in loo adeegsado caburin” Mahad Salaad